AH: 2012 တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်း ကျော်စွာ ၁၀၀ ထဲက ဦးသိန်းစိန်
မနေ့ကတော့ ကမ္ဘာကျော် တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကနေပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ကျော်စွာ ၁၀၀ စာရင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ကျော်ကြားသူတွေ၊ ဖျော်ဖြေသူတွေ၊ ကမ္ဘာကို စိန်ခေါ်ကြသူတွေထဲက လက်ရွေးစင် အယောက် ၁၀၀ကို ရွေးချယ်ထားတာပါ။ မနှစ်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၂၀၁၁ ကျော်စွာ၁၀၀ ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကတော့ နံပါတ် ၆၇ နေရာမှာ ပါဝင်လာပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားကတော့ နံပါတ်စဉ် ၆၁ ယောက်မြောက်နေရာမှာ ပါဝင်ပြီးတော့၊ ဟီလာရီ ကလင်တန်ကတော့ နံပါတ်စဉ် ၈၈ ယောက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာနဲ့ အာဂျင်တီးနား လက်ရွေးစင်ကစားသမား လီယွန်နယ် မက်စီကတော့ နံပါတ်စဉ် ၈၆ ယောက်မြောက်မှာ ပါဝင်လာပါတယ်။ နံပါတ်တစ်ကတော့ ယခုနှစ်ပိုင်းမှာ တရှိန်ထိုး နာမည်ကြီးလာတဲ့ ဘက်စကက်ဘော ကစားသမား ဂျရမီ လင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ၂၀၁၂ ကျော်စွာ ၁၀၀ ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အကြောင်းလေးကို တစ်စေ့တစ်စောင်း ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
"ဦးသိန်းစိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် ဗိသုကာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သမ္မတအဖြစ် တစ်နှစ်ကျော်ကျော်သာ တာဝန်ယူခဲ့သေးပေမယ့် အခြားသော ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က နိုင်ငံတွေလိုမဟုတ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လမ်းကြောင်းပေါ်ကို တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အံသြစရာအကောင်းဆုံး ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်တဲ့ အနုပညာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် အဟောင်းတွေ၊ စစ်ချုပ်တွေ၊ ထိပ်တန်း စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်အားအကြီးဆုံး အတိုက်အခံပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အပါအ၀င် အခြားသော အတိုက်အခံပါတီများ ကိုပါ စုစည်းပြီးတော့ နုနယ်ပျိုမြစ်ပြီး လှုပ်ရှားတက်ကြွနေတဲ့ လူထု တစ်ရပ်လုံးကို ထိန်းကျောင်းခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၆၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရသစ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်၊ ချွတ်ခြုံကျနေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကို ပြန်လည်တည့်မတ်လာအောင် နဲ့ ဒါဇင်ပေါင်းများလှစွာသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကြားမှာ သွေးစည်းညီညွှတ်မှု့၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်မှု့၊ ပေါင်းစည်းမှု့ရအောင် နိုင်ငံတစ်ကာက မြန်မာနိုင်ငံကို ၀ိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကြားကနေ ဒီ ပဏာမ အလုပ် ၃ခုကို ကြိုးစားပြီး လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ခုလိုကြိုးစားတဲ့ ရလဒ် အောင်မြင်မလား မအောင်မြင်မလားဆိုတာကတော့ လူဦးရေ ၅၅ သန်းရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမက အာရှတိုက်အတွက်ပါ အရေးပါပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၂၁ ရာစုရဲ့ နာဖျားမှု့ကနေ နလံထခါစပဲရှိပါသေးတယ်။ တကယ်လို့သာ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ကြိုစားမှု့ရလဒ်တွေ အကောင်အထည်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့ ပြယုဒ်တစ်ခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။"
It's been an amazing balancing act. He's had to keep on board the ex-generals who still dominate government, as well as army chiefs, top businessmen, the opposition parties — including the largest, led by Nobel laureate Daw Aung San Suu Kyi — andayoung and dynamic civil society.
Posted by AH at 4/19/2012 05:00:00 PM
စံပယ်ချို April 19, 2012 at 7:22 PM
မောင်မောင် April 19, 2012 at 8:24 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) April 20, 2012 at 4:44 AM
မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအနေနဲ့ ဘယ်သူရရ ဝမ်းသာပါတယ်။ ဂုဏ်ယူစရာပါ